Guddiga Dastuurka Ee Madaxa Bannaan oo Dacwad Culus Ka Gudbiyey Wasiirka Dastuurka C/raxmaan Xoosh (Akhri Warqadda Dacwada) | Calanka Somalia
← Xiligaan Maxaa Isku Keenay Mr.Farmaajo & Mr.Gaas Nairobi
La Kulankii Wax Iga Bedelay ee Cabdiwali M. Ali Gaas →
Tuesday, June 12th, 201 – Warqad 5-tii bishan June loo gudbiyey xafiiska madaxweynaha DKMG Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed kana soo baxday guddiga dastuurka ee madaxa bannaan iyo guddiga khubarada ee dastuurka ayaa lagu soo bandhigay dacwad ka dhan ah wasiirka dastuurka DKMG C/raxmaan Xoosh Jibriil.
Warqadaasi oo nuqul ka mid ah soo gaartay Shabakada Moment GREEN Media waxaa lagu sheegay in wasiirka dastuurka C/raxmaan Xoosh Jibriil uu ku lug lahaa aflagaado, handadaad iyo wada shaqeyn la’aan joogto ah oo uu ku hayey hawlaha guddiga dastuurka ee madaxa bannaan isla markaana wasiirku uu had iyo jeer warbaahinta ka sheego ereyo dadka nacsiinaya dastuurka cusub.
“Wax badan baan danta qaranka awgeed u soo sabarnay anagoo tixgalineyna qiyamka dastuurku uu leeyahay iyo ahmiyadda ka bixida marxalada ku-meelgaarnimada ee dalka, dadweynaha iyo hogaankooduba ku sugan yihiin. wasiirkan uma aragno qof haba yaraatee dalka, diin iyo ummad midna u daneynaya, midowgooduna dhib ku yahay isla markaana uu ku hawlan yahay si sharci darro ah inuu u soo saaro dastuur cusub.” ayaa lagu yiri qoraalka dacwada ah ee loo diray xafiiska madaxweynaha DKMG ah.
Warqada waxaa madaxweynaha iyo masuuliyiinta sare ee dawlada looga codsaday in tallaabo laga qaado wasiirka dastuurka C/raxmaan Xoosh Jibriil oo sida ay guddiga warqadan qoray ku eedeeyeen inuu cabaqad ku yahay sameynta iyo meelmarinta dastuurka cusub.
Illaa hadda ma jirto wax jawaab ah oo wasiirka dastuurka C/raxmaan Xoosh ka yiri eedeynta isaga ka dhanka ahee ay soo jeediyeen guddiga dastuurka ee madaxa bannaan iyo guddiga khubarada ee dastuurks.
Waxayna noqoneysaa khilaafkii ugu adkaa ee ka dhex aloosma wasiirka wasaaradda dastuurka iyo guddiga dastuurka oo ah labo hay’adood oo ay u wada taallo shaqo adag waqtigana ku yar yahay maadaama dastuurka cusub ansixintiisa ay ka mid tahay shuruudaha ugu waaweyn ee hor yaalla in la sameeyo baarlamaanka cusub iyo dawlada cusub ee waqtigoodu ka harsan yahay lixdan maalmood oo kaliya.